Como Saber Se Meu Whatsapp Está Sendo Rastreado,
Kana isu tine smartphones nyowani, zvirokwazvo imwe yemapurogiramu ekutanga atinoisa ndeye WhatsApp, ndokuti, Iyi mameseji app ndeimwe yeanonyanya kushandiswa nevashandisi pasi rese.
Você está assistindo: Como saber se meu whatsapp está sendo rastreado
Isu tinoshandisa iyo kutaurirana neshamwari uye mhuri nguva dzese.
Isu tinoishandisawo kutumira zvipo, mapikicha, mavhidhiyo nezvimwe. Asi kwete chete isu tinongoendesa chaiwo macheni kana majee, asi isu tinotumirawo pachedu mafaera. Uye kana paine chero chinhu chekuchengetedza, iko kuchengetedzeka. Ichokwadi icho iyo yakasvibirira kunyorera yakagadziridzwa zvakanyanya muzvirongwa zvayo zvekuchengetedzaine encryption, XNUMX-nhanho yekuongorora, uye yekupedzisira-kumagumo kunyorera kwese kutaurirana.
Izvi zvakagadzirisa maburi akakomba aive neWhatsApp munguva yakapfuura, maererano nekuchengetedza. Asi chokwadi, hazvisi zvese zviri 100% zvakachengeteka uye mavhavha anogara akatarisa kunosora chero mhando yekushandisa, uye Nhasi tichaona kuti tingaone sei kana tiri kutsvagirwa kana kana tichigona kuwana account yedu.
Kana akawana Ivo vanozokwanisa kuwana, kuburikidza neaya maTrojans, matauriro edu, mafoni, mapikicha, WhatsApp, kunyangwe uchitaipa pabhodhi, ruzivo rwese urwu rwaizosvika kune iyo terminais kwayakagadzirirwa.
Unofanira kuziva izvozvo Kunyangwe iine GIF faira kana vhidhiyo ipfupi, bhiza reTrojan rinogona kupinda, sezvo rinogona kubata programas yakaipa iyo inokupa mukana kune yedu WhatsApp account kana foni yacho izere.. Iwe haufanire kuenda kure kuti urangarire mafambiro avakaita nenhamba yefoni yemuridzi muhombe weAmazon Jeff Bezos.
Pane rimwe diviIwe unofanirwa kudzora mashandisiro aunoisa pane yako terminais uye mvumo dzavanopihwa kwavari, chero bedzi iwe uchisarudza kuti ndeipi mvumo yauchapa kune akaisirwa maficha, sekuchengetedza, mafoni, mapikicha, kamera, nezvimwe. Saka, kana iwe uchifungidzira kana kudzora yako mvumo kana kuisunungura iyo zvakananga.
Kuti udzivise izvi zvese zvinogona kuitika, unofanirwa kuve wakangwarira kuti usanyanya kuburitsa smartphones yako kana uchishandisa iyo WhatsApp app, Imwe nyaya ndeyekuvandudza kune yazvino vhezheni, sezvo ichipa chengetedzo huru.
Ver mais: Como Mudar A Cor Da Tinta De Parede, 7 Cores Tintas (@7Corestintas)
Uye kana iwe uchiri kufunga kuti vanoramba vachisora ​​pafoni yako, nzira yakanak yekuigadzirisa ndeyekugadzirisa fekitori nekuimisa sekunge yaive nyowani.
Como saber se meu windows esta atualizado
Como saber se meus ovulos sao saudaveis